Alshabaab oo ku hanjabay weeraro dheeraad ah oo ka dhaca Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Alshabaab ayaa bilowga bisha barajeysan ee Ramadaan ku hanjabay iney weeraro dheeraad ah ka geysan doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxa Alshabaab ugu magacaaban gobolka banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaano “Cali Jabal” ayaa shaaciyay iney labalaabi doonaan weerarada ka dhanka ah shisheeyaha ku sugan Muqdisho iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Cali Jabal ayaa ka hadlay howlgal dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday, kaasoio loogu magic daray “Nabad Ku Afur”, wuxuuna ku dooday in qorshahaas looga gol leeyahay in lagu baneysto dhiiga iyo hantida shacabka sida uu yiri.
“Ujeedooyinkaas waxaa ka mid ah in dadka masaakiinta ah ee Xamar ku dhaqan la baneysto dhiigooda, naftooda iyo maalkooda, oo ummada la dilo, oo ummada la dhaco, ayaa ka mid ah.” ayuu yiri Cali Maxamed Xuseen.
Alshabaab ayaa sanad kasta marka la gaaro Ramadaan ku hanjaba iney xoojinayaan dagaalka ay kula jiraan dowldda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Sanadkaan dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho uga dhawaaqday barnaamij amaan oo loogu magaca daray “Nabad Ku Afur”, kazoo dowladdu sheegtay in looga hortegayo weerarada Alshabaab qorsheynayaan.